ဥရောပမှာတော့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာရထား Bridges | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန် > ဥရောပမှာတော့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာရထား Bridges
မီးရထားနဲ့ခရီးသွားကြ ခရီးသည်အလှဆုံးရထား Bridges အချို့ပေးခြင်းများအတွက်ကျော်ကြားတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ရုပ်ရှင် ရှုခင်းအမြင်များ. ရထား Bridges အပေါ်ခရီးသွားလာရန်အခွင့်အလမ်းရယူခြင်း, သငျသညျကိုလှိမ့်တောင်ကုန်းတွေ့နိုင်ပါသည်, ကျေးလက်, လူအပေါင်းတို့သည်သင်၏အဆင်ပြေထိုင်ခုံကနေသမုဒ္ဒရာရထားလမ်းအားဖြင့်ဥရောပကိုဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှာ. တစ်ခါတစ်ရံရထားလမ်းသူ့ဟာသူအရှိဆုံးသတိမမူအလှတရားဖြစ်ပါတယ်. ဤရွေ့ကားလေး ဥရောပရထားလမ်း ရထား Bridges ကွာသင့်ရဲ့အသက်ရှုယူပါလိမ့်မယ်.
ကျနော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးရထား Bridges ရွေးဖြစ်ပါသည် Landwasser Viaduct, ဆွစ်ဇာလန်
ဤသည်ရထား Bridges တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဗိသုကာအံ့သြစရာဖြစ်ပါသည်. သငျသညျငါးမြင့်မားသောတိုင်ပေါ်အနားယူခြောက်လထုံးကျောက်မုတ်တွေ့နိုင်ပါသည်. အဆိုပါတံတားဟာတိုက်ရိုက်ဦးဆောင် 216 မီတာရှည်လျား Landwasser ပြွန်ခေါင်းလမ်း.
အဆိုပါတံတား Schmitten နှင့် Filisur ၏မြို့ရွာအကြား Landwasser မြစ်အထိချဲ့, ထဲမှာ Graubunden ဧရိယာ ၏ ဆွစ်ဇာလန်. ဒါဟာအစတစ်ယူနက်စကိုရဲ့ကမ္ဘာအမွေအနှစ်များကြေညာထားသည်. ဒါဟာစစ်ဆင်ရေးအတွင်းယနေ့ဖွင့်နှင့်ပြီးဆုံးချိန် မှစ. ခဲ့ 1902.
ထွက်မီးရထားတံတား, စကော့တလန်အတွက်ထိပ်တန်းရထား Bridges
ဒါဟာခမ်းနားစကော့တလန်မြေမှတ်တိုင်မြစ်ဖြတ်သန်းသွားသည် ဘွား Queensferry မှာ, ရုံအနောက်ဘက် Edinburgh ၏.
ဒါဟာတာရှည် girders များကပူးပေါင်းသုံးသံမဏိကို double-cantilevers ၏လုပ်မယ့်. ကြီးမား rivets အဆိုပါရထား Bridges ၏အဓိကဖွဲ့စည်းမှုသူတို့ကို connect. ကျောက် Piers အဆိုပါ cantilevers ကိုထောကျပံ့. ဒါဟာအမှန်တကယ်ဗစ်တိုးရီးယားအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦး feat င်.
အဆိုပါမီးရထားတံတားခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သည် 1890 နှင့် refurbished နှင့် repainted 2011-2012. အဆိုပါထှကျမီးရထားတံတားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည် ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် site ကိုကတည်းက 2005. အကြားရှိပါတယ် 190 နှင့် 200 နေ့စဉ်ကြောင့်ဖြတ်ပြီးပြေးရထား.
Hohenzollern တံတား, ဂျာမနီ
အဆိုပါရိုင်းမြစ်တမြစ်အပိုင်းသုံးပိုင်း ဂျာမန် ၏မြို့ Cologne. ခုနစျပါးတံတားဖြတ်ကူး ညားမြစ် Cologne အတွက်. အဆိုပါ Hohenzollern ရထား Bridges သာအလှဆုံးဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်းဂျာမနီမှာအများဆုံးအသုံးပြုရထားလမ်းတံတား. ဒါဟာကျော်ရှုမြင် 1200 ခြောက်ပုဒ်ကိုဖြတ်ပြီးရထားနေ့ရက်တိုင်း.
အဆိုပါHohenzollernbrückeတစ်ခုမဟာတံတားဖြစ်ပါတယ်, အလျားတလျှောက်သုံးသံမုတ်နှင့်အတူ. ဒါဟာခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သည် 1911 နှင့် 1940 ခုနှစ် refurbished, 1950s ကို, နှင့် 1980.
ကသာဖွင့်ကတည်းက 409 ရှည်လျားသောမီတာ, လမ်းသွားလမ်းလာများနှင့်စက်ဘီးစီးများအတွက်တံတားတစ်ခုအပိုင်းလည်းရှိပါတယ်. ရထားပုဒ်၏အသီးအသီးအခြမ်းအပေါ်တဦးတည်းရှိတယ်. လူတွေကအကြားခြံစည်းရိုးပေါ် '' ချစ်ခြင်းမေတ္တာသော့ခလောက် '' အားမရစတင်ပါပြီ လက်ရန်းတန်း နှင့်လူကူးဒေသများကတည်းက 2008.
မြူးနစ် Cologne မှရထား
Chamborigaud ၏ Viaduct, ပြင်သစ်
သငျသညျ Chamborigaud ၏ပြင်သစ်ရွာ၌ဤအံ့မခန်း semicircular မဟာရထား Bridges တွေ့ပါလိမ့်မယ်, ခုနှစ်တွင်ပြီးစီး 1867. ဒါဟာအသုံးပြုမှုအတွက်နေဆဲယနေ့ဖွင့်.
ကျောက်ကို viaduct အဆိုပါ Luech မြစ်ဖြတ်သန်းသွားသည်. ဒါဟာတစ်ဦးစုစုပေါင်းအရှည်နဲ့ကွေးတံတားဖွင့် 387 မီတာ. သို့သျောလညျး, ကသာ 14m အကျယ်မှာအလွန်ကျဉ်းမြောင်းသောင်. Chamborigaud ရဲ့ကွေး၏ Viaduct အထက်ရင်ဆိုင်နေရ, ဒီလိုမျိုးအများစုသည်အခြားတံတားများမတူပဲ.
စန်တာ Giustina မီးရထားတံတား, အီတလီ
ရထား viaduct အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ် 31 ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးရထားတံတားများ၏စာရင်းအပေါ်. ဒါဟာရပ်တည် 145 ရုံမြင့်မီတာ 78 ရှည်လျားသောမီတာ. ဒါဟာရဲ့အဆုံးမှာတည်ရှိပြီးရဲ့ စန်တာ Giustina ရေကန် Dermulo အတွက်, မြောက်ပိုင်းအီတလီ.
အဆိုပါစန်တာ Giustina ရေကန်ကြောင့်ဖြစ်စေဖြစ်ပြီးကနေစီးသောရေကိုထုတ်လုပ် လျှပ်စစ်မီး. ဒါဟာအစအဖြစ်ကောင်းလူသိများအတွက် ရေအားကစား နှင့်နူးလှေလှော်ကစားနည်း.
Trento ရထား Dermulo မှမီလန်
တူရင် Dermulo Trento မှရထား
Trento ရထား Dermulo မှ Padua
Trento ရထား Dermulo ဖို့ဗင်းနစ်
လူ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဤအံ့ဘွယ်သောအမှုကိုမြင်ရထား Bridges အပေါ်တစ်ဦးရထားစီးယူဖို့အဆင်သင့်? သင့်ရဲ့ထိုင်ခုံဘွတ်ကင်လုပ်ရန်မှာမဆိုဘွတ်ကင်အခကြေးငွေပေးဆောင်ကြဘူး www.saveatrain.com.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/breathtaking-train-bridges-europe/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, သင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်အဆိုပါ/သင့္ေတာ္ေသာအ/ပါဠိ/ပြင်ဆင်နှင့်သးသည္။.
#Edinburgh #Luechriver #Rhineriver #viaduct longtrainjourneys SwissAlps ရထားခရီးသွား travelcologne